The Kpop Times Media - 'At Eighteen' ဒရာမာမှာ လိင်တူချစ်သူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Moonbin
HomeNewsMusicMoviesTV SeriesGalleryReviewsOthers— Idol Profile— Idol BirthdaysContact UsSearch
updated 4:50 AM UTC, Feb 22, 2020
ဖေဖော်ဝါရီလ အဆင့်သတ်: ၂၀၂၀၊ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့ကနေ ဖေဖော်ဝါရီ ၂
ဘ၀ အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ : BTS အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ' ON ' MV ကို ပရိသတ
BTS က တစ်ခုတည်းသော I: မကြာသေးခင်က ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အထင်ကရ လူထုဖို
စစ်မှုထမ်းဖို့ စာရင်: ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းတွေအရ Big
Instagram မှာ Follow: Park Seo Joon အနေနဲ့ မှတ်တိုင်အကြီးကြီးတ
Chen လက်ထပ်မှာ မှန်ပ: EXO Chen လက်ထပ်မယ့် သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
EXO-L ထံ ရေးတဲ့ Che: EXO Chen က သူ့ချစ်သူ ရုတ်တရက် ကိုယ်ဝန် လ
ပွဲဦးထွက် တစ်ကိုယ်တေ: အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
BTS ရဲ့ 'ON' ကို Tik: ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ BTS ရဲ့ လေးခု
Son Ye Jin နဲ့ ချိန်: မင်းသား Hyun Bin နဲ့ မင်းသမီး Son
'At Eighteen' ဒရာမာမှာ လိင်တူချစ်သူအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Moonbin
Published in Series/Tv Shows
'At Eighteen' ဒရာမာကတော့ လှည့်ကွက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြလိုက်ပါပြီ။
ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာ ၂ ရက်နေ့မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့ 'At Eighteen' ဒရာမာရဲ့ အပိုင်း ၁၃ မှာ ASTRO အဖွဲ့ဝင် Moonbin သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဂျောင်အိုဂျယ်ဟာ သူရဲ့ ရည်းစားဟောင်း ဂွမ်ဒါဟီးကို ရုတ်တရက် ဖွင့်ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လမ်းခွဲရတဲ့ တိကျရှင်းလင်းတဲ့ အကြောင်းအရင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဂျောင်အိုဂျယ်ဟာ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူ့စိတ်ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ပြောလိုက်တာပါ။ အဲ့ဒါကတော့ ဂွမ်ဒါဟီးတစ်ယောက် အာဟာရချို့တဲ့လို့ကျောင်းဆေးခန်း ရောက်ရာကနေ အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်လေး ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။
အိုဂျယ်ဟာ ဒါဟီးဟာ သတိရလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ထွက်သွားမလို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားရတာ အပြစ်ရှိတယ်လို့ ခံစားလာရလို့ သူသဘောကျတာ ယောကျာ်းလေး ဖြစ်တဲ့အကြောင်း ထုတ်ပြောလိုက်တာပါ။ အိုဂျယ်က “ငါ သဘောကျနေတဲ့ သူရှိတယ်။ မိန်းကလေးမဟုတ်ဘူး။” လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ ဒါဟီးဟာ အံ့သြသွားခဲ့ပြီး ပြောစရာစကားမရှိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ ရည်းစားဟောင်း အိုဂျယ် သဘောကျနေတယ်ဆိုတာ ဟီယောင်းလားဆိုပြီး မေးမြန်းခဲ့ပါတော့တယ်။ ကဲ အဲ့ဒီဇာတ်ဝင်ခန်းကို မကြည့်ရသေးရင် အောက်မှ လင့်လေးကနေ တဆင့်လည်း ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်း အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ BTS Jimin က ပထမနေရာမှာ ရပ်တည်
မြန်မာနိုင်ငံ မှာလာရောက်ရိုက်ကူးမယ့် KARD, PENTAGON, ASTRO , (G)I-DLE တို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ 'LAWS OF THE JUNGLE"
The Show မွာ 1st Win ရခဲ့တဲ့ ASTRO
ပွဲဦးမထွက်ခင်တုန်းက Cha Eun-woo ပါဝင်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ် လူပြောများနေ
အေဂျင်စီကဝန်ထမ်းတွေကို လက်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ Cha Eun Woo
More in Series/Tv Shows Section « ငရဲခန်းမှ သူစိမ်းများ - အပိုင်း ၁ (မြန်မာစာတန်းထိုး) tvN ရဲ့သမိုင်းမှာ ကြည့်ရှုနှုန်းအမြင့်ဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ "Hotel Del Luna" ဒရာမာ »
Series/Tv Shows (130)
Idol Birthdays (8)
Idol Profile (16)
Copyright © 2018 The K-Pop Times Media, Myanmar. All Rights Reserved. Proudly presented by OrientWebs! Media Group.